ဦးနှောက်ကို implants စက်ရုပ်လက်မောင်းကိုထိန်းချုပ် - အတွေး၏တန်ခိုးနှင့်အတူ - သတင်း Rule
ဦးနှောက်ကို implants စက်ရုပ်လက်မောင်းကိုထိန်းချုပ် – အတွေး၏တန်ခိုးနှင့်အတူ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဦးနှောက်ကို implants စက်ရုပ်လက်မောင်းကိုထိန်းချုပ် – အတွေး၏တန်ခိုးနှင့်အတူ” ဟန္န Devlin ကရေးသားခဲ့, သိပ္ပံပညာကသတင်းထောက်, The Guardian ကကြာသပတေးနေ့က 21 မေလများအတွက် 2015 18.31 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Erik Built, 34 နှစ်အရွယ်အမေရိကန်, ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာသည်မိမိလက်နက်သို့မဟုတ်ခြေထောက်ရွှေ့နိုင်ခြင်းခဲ့, တစ်ဦးသေနတ်ဒဏ်ရာဆင်းလည်ပင်းကနေလေဖြတ်သူ့ကိုကျန်ရစ်ကတည်းက. အခုတောင်မှ, သူငယ်သောအရာတို့ကိုလွဲချော်.
"ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘီယာမသောက်နိုင်ဖြစ်ချင် – ငါ့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာသောက်ယူနိုင်မည်ဖြစ်, ငါသည်ငါ့ဘီယာထဲကတစ်ငုံအရင်သောက်ယူရန်နှင့်ငါ့အားဆက်ကပ်ဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကမေးရန်ရှိသည်မဟုတ်လိုတဲ့အခါ,"ဟုသူကဆိုသည်. "ငါတကယ်ကလွတ်လပ်ရေးလက်လွတ်။ "
Sorto မကြာသေးမီကဒီရည်မှန်းချက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့, သူရည်ရွယ်ချက်တွေထားကြပါတယ်ဘယ်မှာဦးနှောက်တစ်ဒေသထဲမှာထဲထညျ့တဲ့ neuro-ခြေတုလက်တုစက်ကိုရှိသည်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်အခါ,.
ရုံကအကြောင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်, Sorto တစ်ကောက်ရိုးသုံးပြီးပုလင်းမှမသောက်ရန်စက်ရုပ်လက်မောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်, ချောမွေ့တဲ့လက်လှုပ်လက်ဟန်ခြေဟန်လုပ်ဆောင်, နှင့်ပင် "ကြောကျကစား, စက္ကူ, ကတ်ကြေး ".
သူကတိုက်ရိုက် 'တစ်ဦး Out-of-ကိုယ်ခန္ဓာအတှေ့အကွုံ "ကဲ့သို့အဖြစ်စက်ရုပ်လက်မောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ကိုဆောင် ခဲ့. ဖော်ပြထားတယ်.
အဆိုပါကြိုတင်မဲ, သောလူနှင့်စက်အကြားနယ်နိမိတ် blurs, ကျောရိုးဒဏ်ရာချောမွေ့စွာအနာဂတ်မှာစက်ရုပ်ခြေလက်အင်္ဂါသို့မဟုတ်ပင်ခန်ဓာကိုယျတစျခုလုံးဝတ်စုံထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလူနာများ၏အလားအလာပေါ်ပေါက်.
ယခင်က, သိပ္ပံပညာရှင်များ amputees အလားတူနည်းပညာကိုအောင်မြင်စွာသရုပ်ပြခဲ့ကြ, အကျောရိုးနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ကနဂိုအတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိဘယ်မှာ. ဒီလျှပ်စစ် Impulses သတင်းပို့လက်ရုံးအတွက်အာရုံကြောထံမှထွက်ဖတ်နှင့်ခြေတုလက်တုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်. တစ်ဦးကျောရိုးဒဏ်ရာလူနာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, သို့သော်, the signals need to be decoded directly from the brain.
Makingasmoothie using brain control andarobotic arm. ဗီဒီယို: Spencer Kellis, Science magazine
အခုချိန်အထိ, scientists have focused on the brain’s motor cortex, which generates the electrical signals that are sent down the spinal cord and control the contractions of every muscular movement.
သို့သော်, the resultant neuro-prosthetics, which have been trialled onahandful of patients, produced movements that were delayed and jerky: not the smooth and seemingly automatic gestures associated with natural movement.
In the latest trial, scientists inserted implants into the “higher” brain region, called the posterior parietal cortex (PPC), that gives rise to the intention to move, rather than the details of how we execute the movements.
Richard Andersen, who led the trial at California Institute of Technology, ကပြောပါတယ်: “When you move your arm, you really don’t think about which muscles to activate and the details of the movement – such as lift the arm, extend the arm, grasp the cup, close the hand around the cup, နောက် ... ပြီးတော့. အစား, you think about the goal of the movement, ဥပမာအားဖြင့်, ‘I want to pick up that cup of water.’”
By decodingaperson’s actual intention, the scientists were able to do better at achieving their goal.
Sorto was shot in the neck at the age of 21, atatime when he was involved in gang activity. He has since earnedacollege degree and now serves asapeer mentor to others who have suffered spinal cord injuries, but relies on others for any movement he needs to make.
After enrolling to be involved in the research, Sorto underwent surgery in 2013, during which he hadapair of small electrode arrays implanted in two parts of the PPC – one that controls reach and another that controls grasp.
Each four-by-four-millimetre array contains 96 လျှပ်, each recording the activity of single neurons. The arrays are connected byacable toasystem of computer processors that decode the brain’s intent and turn this into movements of the robotic arm.
After recovering from surgery, Sorto tested his ability to control the arm in the laboratory, something he described as surprisingly easy.
“It wasabig surprise that the patient was able to control the limb on day one – the very first day he tried,” said Andersen. “This attests to how intuitive the control is when using PPC activity.”
How different arms work
Following several weeks of training, Sorto learnt to controlacomputer cursor, drink fromabottle usingastraw and makeahand-shaking gesture.
Inavideo, from one of the sessions, he beams with joy after successfully takingasip ofadrink and exclaims “that’s so awesome!", while raising the black prosthetic arm aloft inatriumphant gesture.
“This study has been very meaningful to me,” said Sorto. “It gives me great pleasure to be part of the solution for improving paralysed patients’ lives. I think that if it were safe enough, I would really enjoy grooming myself – shaving, brushing my own teeth. That would be fantastic.”
“We are atapoint in human research where we are making huge strides in overcomingalot of neurologic disease,” said neurologist Christianne Heck, of the University of Southern California. “These very important early clinical trials could provide hope for patients with all sorts of neurologic problems that involve paralysis such as stroke, brain injury, ALS and even multiple sclerosis.”
Andersen and colleagues are now refining the technology so that is could eventually allow patients to perform finer motor skills. ဒီလိုလုပ်ဖို့, they believe it will be necessary to createaprosthetic that provides sensory feedback from the robotic arm to the brain, rather than the system working asaone-way stream.
“To really do fine dexterous control, you also need feedback from touch,” said Andersen. “Without it, it’s like going to the dentist and having your mouth numbed. It’s very hard to speak without somatosensory feedback.”
25174	0 အပိုဒ်, ဟန္န Devlin, ကျန်းမာခြင်း, အဓိကအပိုင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, neuroscience, သတင်း, သိပ္ပံ, အုပ်ထိန်းသူ, ဗြိတိန်သတင်း
← ဟွာဝေး P8 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း သတိသမ္အောက်မေ့ Be: မူးယစ်အခမဲ့အခမဲ့ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုမဆိုလိုပေ →